“အတွေးစလေးတွေ”: ငှက်မသိတော့ ဆက်ရက်ကို ချိုးထင် . . .
ငှက်မသိတော့ ဆက်ရက်ကို ချိုးထင် . . .
မနေ့ညက တစ်ညလုံးနဲ့ ဒီနေ့တစ်မနက်လုံး Google နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ပြဿနာဖြစ်လို့ မဆုံးပါ။ ဘာတွေက၊ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတာလည်း နားမလည်တော့ပါ။ mail စစ်မယ်ဆိုပြီး account log in ၀င်လိုက်တာ
password မှားတယ်ဆိုပြီး အ၀င်မခံပါ။ ကိုယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်း နံပါတ်တွေမှတ်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းချက်ရှိတာမို့ password တွေကို ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ ပေးလေ့ရှိတဲ့အပြင် firefox ကိုပါ မှတ်ခိုင်းထားသေးတာပါ။ ကိုယ့် netbook ကိုယ် ဘယ်သူမှ မကိုင်တာကြောင့် လုံခြုံရေးကိုယ်လည်း မပူရတာတစ်ကြောင်းကြောင့်လည်းပါပါတယ်။
အခါတိုင်းဆိုရင် လိုင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဘာpasswowrd မှ ဖြည့်စရာမလိုဘဲ ၀င်နေကြ site တွေထဲကို တန်းဝင်ရုံပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်လောက်ကစပြီး password ပြန်ပြန်တောင်းနေတာ ခံရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်password ကိုယ် ရိုက်ထည့်ပြီး ၀င်ရုံမို့ ဒုက္ခတော့ သိပ်ရောက်တယ်မရှိပါ။
မနေ့ကတော့ ဘာတွေဖြစ်ကုတ်တယ် မသိတော့ပါ။ password ရိုက်ထည့်တိုင်း မှားတယ်ပဲပြောပြီး access လုပ်လို့မရပါ။ အဆိုးဆုံးက Gtalk ပါ။ ဘယ်လိုမှ ၀င်လို့မရတာကြောင့် သူပဲမှားသလားဆိုတဲ့ စ်ိတ်ကူးနဲ့
ကိုယ်သုံးလေ့ရှိတဲ့ password တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ရိုက်ထည့်ပြီး စမ်းမိမှပဲ ပိုဆိုးပါလေရော။ ကိုယ့်ကိုယ်သူခိုးထင်ပြီး account ပါပိတ်ချလိုက်ပါရောလား။
ကိုယ်ကလည်း Google ထုတ်ကုန်တွေကို အင်မတန် သဘောတွေ့သူမို့ account ပိတ်ခံရတာ တော်တော်ဆိုးသွားပါတယ်။ ၀င်နေကျ ကိုယ့်blog ကိုတောင် ၀င်လို့မရတဲ့ ဘ၀ရောက်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ Google ကတောင်းတဲ့အတိုင်း mobile နံပါတ်ပေးလိုက်တော့ code ပြန်ပို့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်ကြာမှ SMS ရောက်လာတယ်။ ကိုယ့် N72 အားနည်းချက်ကြောင့်ထင်ပါရဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်ကလည်း SMS မရောက်မချင်း access သုံးလေးခါလုပ်မိတဲ့ အပြင် ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်တင်မကဘဲ သူများဖုံန်းနံပါတ်ပါသွားပေးမိတော့ ရောက်လာတဲ့ code တွေအများကြီးနဲ့ ပြဿနာတက်ပါလေရော။ သူက တစ်ခါ access လုပ်ရင်code နံပါတ်တစ်ခုပေးပြီးအဲဒီနံပါတ်ကိုပဲ အသိအမှတ်ပြုတာကိုး။
သဘောပေါက်သွားလို့ ကိုယ့်နံပါတ်လေးပြန်ရိုက်ထည့်ပြီး SMS အလာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်မယ်လုပ်တော့မှ အဲဒီနံပါတ်က access လုပ်တာများနေလို့ဆိုပြီး လက်မခံတာနဲ့တိုးပါလေရော။ ဒါနဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နံပါတ်ပေးလိုက်မှ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒါတောင် account ထဲ ၀င်ဝင်ချင်း password ဟောင်း ပြန်တောင်းသေးတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ အဟောင်းကို သူမှတ်မိပေလို့။ Google ကတော့ ပြောပါတယ်။ မသမာမှုတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ကာကွယ်ပေးထားတာပါတဲ့။
ကိုယ့်မှာတော့ “ငှက်မသိတော့ ဆက်ရက်ကို ချိုးထင်၊
အချက်မသိတော့ သမက်ကို သူခိုးထင်”ဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲ ကိုယ့် account ကို access လုပ်တာတောင် မသမာသူထင်တဲ့ Google ကြောင့် ပညာတွေ တိုးခဲ့ပါကြောင်း...
Posted by Han Kyi at 8:12:00 pm
ပန်းကလေးတွေ ဖူးတံချီ . . .
သင့်ရာအပ်ပို့ . . .
ရိုးရာ . . .
အ်ိမ်အပြန် . . .
အကောင်းဆုံးတွေ ပေးရအောင် . . .
၀မ်းနည်းလို့ဖြင့် ထိုင်မနေချင် . . .
ကိုယ်လဲလေ လောကီသား . . .
နှုတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား . . .
ပညာခေတ်ရဲ့ လူငယ်များအတွက် . . .